ILibreOffice New Generation Ifuna Ukuheha Abantu Abasha Abengeziwe Emphakathini WeLibreOffice Nomthombo Ovulekile | Kusuka kuLinux
I-Document Foundation (inhlangano engenzi nzuzo ephromotha isoftware yokucubungula imibhalo evulekile, phakathi kokunye) waziswa futhiulwesihlanu olwedlule isifiso sakho sokwandisa umphakathi wakho ngokwethula uhlelo olusha Isizukulwane esisha seLibreOffice, okufanele ikuvumele ukuthi uhehe abantu abaningi, ikakhulukazi abantu abasha.
I-LibreOffice New Generation en iphrojekthi ehlose ukuheha abantu abasha, ikakhulukazi abantu abasha, emphakathini weLibreOffice. Isisekelo simemezele ukuthi yize iziqhenya ngokuhluka komphakathi wayo wamanje nokuba khona kwabantu bayo yonke iminyaka, ikholelwa ukuthi abantu abasha bayasiza ukuletha imibono nezindlela ezintsha zephrojekthi.
Isizukulwane esisha seLibreOffice: kuyini?
“Namuhla simemezela iphrojekthi entsha: iLibreOffice New Generation. Akukona okuphathelene nesoftware, kumayelana nabantu abalandelayo. Njengoba uyazi, iLibreOffice idalwe ngumphakathi womhlaba wonke wabathuthukisi abaqinisekisiwe kanye namavolontiya, abasebenza kukhodi yomthombo, ukuhumusha, imibhalo, ukuklama, ukulawula ikhwalithi, ukumaketha, ingqalasizinda, nokuningi. Sifuna ukufinyelela kubantu abaningi, ”kusho le nhlangano ngesikhathi ibhala nge-blog ngoLwesihlanu.
Ngokusho kweposi le-blog, impela noma ngubani angajoyina iphrojekthiNoma kunjalo, ukubamba iqhaza kwentsha kuyadingeka futhi kuyakhuthazwa.
"Ngenxa yalesi sizathu, singathanda ukuthi wonke umuntu asisize sibandakanye abasha esizosebenzisana nabo kulo msebenzi futhi sibasize bazibandakanye emaqenjini ethu," kusho isisekelo. Ngakho-ke, i-Document Foundation imemezela ukuthi uma ungumfundi noma umfundi wasesikoleni esiphakeme usebenzisa i-LibreOffice, ingathanda ukuzwa kuwe noma, ngokunembile, izimpendulo zakho ochungechungeni lwemibuzo enayo. Kungani usebenzisa iLibreOffice? Ungayithuthukisa kanjani?
Ngokuqondene nomsebenzi ozokwenziwa, iThe Document Foundation kusho lokho kubafundi abaningi abafaka isandla kuma-software wamahhala nemiklamo yemithombo evulekile bathanda ukuba nokuthile okuqinisekisa umsebenzi wabo.
Kwalokhu, ikhiphe amabheji avulekile eminikelo yomphakathiLawa amabheji akhethekile anemethadatha ngaphakathi, ekhombisa okwenziwe umuntu othile. “Ngakho-ke sithanda ukuqala ukusabalalisa namalungu omphakathi amancane nasebasha,” kusho yena.
IDocument Foundation ibiza lawa mabheji Vula amabheji futhi ngithanda futhi ukuklomelisa umsebenzi wentsha ngala mabheji.
“Sineminye imibono namaphrojekthi, kepha singathanda ukuzwa kuwe! Yini enye esingakunikeza yona? Singabona kanjani futhi siklomelise abasebenzi ngomsebenzi wabo? Sazise ukuthi ucabangani… ”wanezela.
Ungabhalisa kanjani kuLibreOffice New Generation?
Ngeminye imininingwane ngokuqhubeka kwephrojekthi, Isisekelo simema amaqembu anentshisekelo ukuthi ajoyine iqembu lawo leTelegram. Lapho, ungaxoxa nge-Open Badges neminye imibono ngeLibreOffice New Generation naye.
"Silangazelela ukuhlangana nawe futhi sizwe imibono yakho kanye nokuhlangenwe nakho kwakho," kuphetha uMike Saunders.
Ekugcineni, kulabo abasalokhu abazi iLibreOffice kufanele bakwazi lokho leli suite lomthombo ovulekile wamahhala, etholakala kuphrojekthi ye-OpenOffice.org, yenziwe futhi inakekelwa yiThe Document Foundation.
I-interface yayo ehlanzekile namathuluzi athuthukile akuvumela ukuthi uveze ubuhlakani bakho futhi uthuthukise umkhiqizo wakho. ILibreOffice ihlanganisa izinhlelo zokusebenza ezahlukahlukene: bhala isoftware yokucubungula amagama, ubale ispredishithi, uthakazelise imodyuli yesethulo, udwebe uhlelo lokusebenza lokudweba kanye ne-flowchart, usekele i-database ne-database interface kanye nezibalo isihleli sefomula yezibalo.
Uhlobo olukhulu lwakamuva lweLibreOffice, iLibreOffice 7.0, ikhishwe ngo-Agasti owedlule.noma. ILibreOffice 7 yethule izinguquko ezimbalwa nezithuthukisi, kufaka phakathi ukusebenzisana okuthuthuke kakhulu ne-Microsoft suite.
Ukuthuthuka kokusebenza kuqhamuka ekusheshiseni okususelwa kuVulkan GPU eyakhelwe kwiLibreOffice ngemuva kokuthi ikhodi yaseCairo idluliselwe kumtapo wezincwadi wakwaGoogle eSkia. Kubalandeli benguquko yobuhle, kukhona ukubukeka okusha kwetimu yesithonjana seSukapura, okuyitimu ezenzakalelayo yabasebenzisi be-macOS.
Okokugcina uma ufuna ukwazi kabanzi ngayo mayelana nezindaba, ungabheka imininingwane ku isixhumanisi esilandelayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » ILibreOffice New Generation ifuna ukuheha abantu abasha abengeziwe kwiLibreOffice nomphakathi ovulekile